तुलसीपुर, १ असार । तुलसीपुरका युवाहरुले एमसिसि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रघाती एमसिसि चाहिदैन भन्दै उनीहरुले शनिबार तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
एमसिसि सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको र देशको हितविपरीत भएकोले कुनैपनि हालतमा यो परियोजना संसदबाट पास गर्न नहुने तुलसीपुरका स्वतन्त्र युवा हेमन्त प्रकाश वलीले बताए ।
आधुनिक हतियार भण्डार गर्ने, उत्पादित बिजुली नेपालभन्दा पहिले गोरखपुर लग्ने, परियोजनाका लागि जनशक्ति र श्रोत साधनमा अमेरिकी एकाधिकार, कर तिर्न नपर्ने,
भारत र अमेरिकाको ईच्छाअनुसार सम्झौता रद्द गर्नसक्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी एकाधिकार जस्ता विवादास्पद अनुसूचिले देश र जनताको हितविपरीत भएको कुरा प्रष्ट भएको उनले दाबी गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा तेजप्रसाद पोख्रेलले एमसिसिमार्फत देश बेचेर खाने रणनीति भएको बताए । उनले अमेरिकालाई आफ्नो देश बेचेर आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर बाँच्ने कुरा कति उपयुक्त छ ? लेखा परीक्षणसम्म नेपालले गर्न नपाउने यो कस्तो सम्झौता हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।